Turkey High Speed ​​na High Speed ​​Railway Lines na map | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraTurkey High Speed ​​na High Speed ​​Railway Lines na map
11 / 11 / 2019 06 Ankara, 35 Izmir, 38 Kayseri, 42 Konya, 58 Sivas, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, Mpaghara Aegean, General, Oru ngwa ngwa, Maps, Turkey
toki, elu na-agba na ngwa ngwa okporo ígwè edoghi na map
Turkey Akwa Speed ​​na High-Speed ​​Railway Line na map; N'ime owuwu nke okporo ụzọ dị oke elu, a na-ekpebi ụzọ ụgbọ okporoko nke Istanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir na Ankara-Konya dị ka isi netwọrụ. zubere interconnection 15 nnukwu obodo nke anyị elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè bụ isi Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya Konya-Istanbul na Ankara-Istanbul na akara malitere YHT management na Turkey ghọrọ nke asatọ nke isii ná mba Europe na ụwa na elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ọrụ. N'ikwekọ na ebumnuche ndị ahụ, a rụchara arụmọrụ nke 1.213 km High Speed ​​Railway Line. Ankara Sivas, Ankara-İzmir High Speed ​​Railway na-arụ ọrụ. Ọrụ dị nro Kayseri-Yerköy High Speed ​​Railway na-aga n'ihu.
N'ihi ọrụ a na-aga n'ihu na nke a na-eme atụmatụ, obodo anyị nwere nnukwu netwọọdụ ụgbọ ala na ọsọ ọsọ site n'ọwụwa anyanwụ ruo ọdịda anyanwụ yana site na ndịda ruo ndịda. N'ụzọ dị otu a, GSTs ga-agbaghari echiche nke nnweta site na ijikọ obodo mepere emepe ma mepụta ụzọ mmepe mmepe mpaghara site na ijikọ obodo anyị na arụmọrụ ha niile, ọ bụghị ụzọ okporo ụzọ.
Ankara-Highgbọ elu Ankara-Istanbul High Speed ​​Railway
Akụkụ Ankara-Eskişehir, nke bụ mpaghara izizi nke Ankara Istanbul High Speed ​​Railway Project, etinyere ọrụ n’afọ 2009 iji belata oge njem n’etiti Ankara-Istanbul, obodo abụọ kachasị ukwuu nke mba anyị, iji mepụta ohere njem dị mma, nke dị mma ma dị nchebe ma si otú a mee ka ohere nke okporo ụzọ ụgbọ elu dị na njem. YHT abụwo ihe mkpali maka ndị njem ụgbọ elu site na ime ka ụmụ amaala na-eme njem n'etiti Ankara na Eskişehir n'ụzọ kachasị ọsọ, nke kachasị mma na nke dị nchebe. Citizensmụ amaala anyị echetala mgbe ha na-echefu njem ụgbọ okporo ígwè.
E wuchakwara ngalaba Eskişehir-Pendik ma tinye 25 n'ọrụ ya na July 2014. Site na Ankara-Istanbul High-Speed ​​Railway Project nwere ogologo kachasị nke 513 km / h n'ohere ogologo nke 250 km, oge njem dị n'etiti obodo ukwu abụọ 3 awa 55 min. Ọ nọwo na-.
A ga-ejikọ okporo ụzọ Ankara-Istanbul High Speed ​​Speed ​​na Marmaray na obere oge, ọ ga-eweta njem na-anaghị akwụsị akwụsị site na Europe gaa Eshia. Site na oru ngo a, nke jikọtara obodo abụọ kachasị ukwuu nke mba anyị, mmekọrịta mmekọrịta, nke akụ na ụba na nke ọdịbendị dị n'etiti obodo ga-abawanye na mba anyị, nke nọ na ntinye aka na European Union, ga-adị njikere maka EU na akụrụngwa njem njem ya.
Usesgbọ ala n'etiti Eskişehir-Bursa nwere njikọ YHT na ụgbọ oloko n’etiti Kütahya, Afyonkarahisar na Denizli amalitela ịgba ọsọ ma nwee mbelata nke ukwuu n’oge njem ndị a.
Turkey si ọsọ na-agba yht'n na YHT-kwukwara njem nhọrọ anyị njem 28 nde ụmụ amaala na ohere Istanbul adade.
Akara Ankara-Konya YHT, nke ndi nkwekọrịta obodo gosipụtara na ndị ọrụ obodo na akụrụngwa nke aka ya, ka etinyere aka na 2011. Polatlı, nke dị na Ankara-İstanbul Project, kewapụrụ site na ndịda yana ụzọ ụgbọ elu dị elu nke nwere ogologo 212 km / h wuru.
Ya mere, Konya, isi obodo mbu nke ndị Turkey na Anatolia na Ankara, isi obodo obodo anyị, bịara dịkwuo ibe ha nso. nwekwara; Iji jikọọ Karaman, Antalya / Alanya n'ógbè na An-kara nwere YHT, enwere ụgbọ elu ndị ejikọtara na YHT site na Konya.
Tupu oru a, ụgbọ oloko a na-ejikarị n'ụzọ Eskişehir-Kütahya-Afyon si Ankara gaa Konya.
Ankara-Sivas High Railway Railway Project
A na-aga n’ihu Ankara-Sivas YHT, nke bụ otu n’ime njiri dị mkpa nke ụzọ ụgbọ okporo ígwè na-ejikọ Eshia Maịnọ na Asia Minor n’akụkụ ụzọ siliki. Ebumnuche ya ka e jikọọ ya na Baku-Tbilisi-Kars train project yana Sivas-Erzincan, Erzincan-Erzurum-Kars n'okporo ụzọ ụgbọ elu.
Angbọ okporo Ankara-Sivas dị ugbu a bụ 603 km ma oge njem bụ awa 12. Ihe oru ngo a, nke ga-eme ka oge njem dị mkpirikpi dị n’etiti obodo abụọ ahụ bu n’obi, iji wuo ụzọ ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ nwere ụzọ abụọ, ọkụ eletrik, mgbama ma dị mma maka ọsọ 250 km / h kacha. Ya mere, eriri ahụ ga-egbubi mkpirisi gaa 198 km ma oge njem ga-ebelata site na 405 awa gaa 12 awa.
Anzọ Okporo -zọ Anara-Ankara-Konya ugbu a, Ankara-Konya na-aga n’ihu n’okporo ụzọ okporo ụzọ Ankara-Izmir dị elu na ntinye ọrụ, nke ga-eweta njikọ dị n’etiti ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke mba anyị, ịdị mkpa ebumnuche YHT ga-abawanye.
Ankara-Ulo Oru Ankara-Izmir High Speed ​​Railway
Ulo oru, ikike njem na obubata obodo anyi na 3. Constructionlọ nke Ankara-İzmir High Speed ​​Railway Project, nke ebidola ime İzmir, obodo kachasị ukwuu, na Manisa, Uşak na Afyonkarahisar n'okporo ụzọ ya na-aga Ankara dị nso.
Angbọ okporo Ankara-Izmir dị ugbu a bụ kilomita nke 824 na oge njem dị ihe dịka 14 awa. A ga-ebelata ohere dị n’etiti obodo abụọ ahụ gaa na 624 kilomita na oge njem gaa na 3 awa 30 nkeji.
Kayseri-Yerköy Nnukwu Ọgba Ragbọ okporo Ọgbọ
N’agbata Kayseri na Yerköy, eriri abụọ nke 250 km, eriri ọkụ eletrik na signaled dị elu ga-arụ ọrụ. A ga - ejikọta ọrụ Kayseri-Yerköy YHT na eriri Ankara-Sivas YHT site na Yerköy.
Ọrụ dị nro nke Kayseri-Yerköy High Speed ​​Railway Line na-aga n'ihu.
Kayseri Yerköy High Railway Line
Moovit, Transportgbọ njem ọha maka Microsoft Azure Map…
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ime ka ụmụaka nwee mmasị na maapụ si Yandex…
Onye isi oche TCDD Uygun, Uzo elu na elu Speed…
Charter High Speed ​​Okporo ígwè Projects maka Advanced Turkey
Urban Okporo ígwè Lines na Services na Turkey ...
Geszọ okporo ụzọ China na okporo ụzọ awara awara…
Ngosipụta ọmịiko: Ankara-Bursa High Speed ​​Line ile
10. Congress High Speed ​​Speed ​​Railway Congress na Ankara…
Onye ozi Aslan, Ankara-Sivas okporo ụzọ dị elu…
Ankara Konya High Speed ​​Railway Map
Ankara-Sivas usoro ụgbọ okporo ígwè dị elu
Kayseri Yerköy Nnukwu ilgbọ Okporo Ọgba